Apple - ngivela kwaMac | Ngivela kwaMac (Ikhasi 16)
I-WWDC, i-ARM, i-HomePod nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Isonto elibalulekile le-Apple nezinguqulo ezintsha ze-OS ehlukile, emahoreni ambalwa nje lizoqala eSan José ...
Izithombe zesikrini ze-macOS 10.14 zidaluliwe: Imodi Emnyama entsha, uhlelo lokusebenza lwe-Apple News lwe-Mac phakathi kwabanye
Kuhlungwe izithombe-skrini zokuqala ze-macOS 10.14 ngonjiniyela uSteve Troughton Smith, egqamisa imodi emnyama yohlelo lonke
I-albhamu entsha kaKanye West itholakala ku-Apple Music zisuka nje
I-albhamu entsha kaKanye West izosakazwa zisuka ku-Apple Music nakwezinye izinkundla zokusakaza umculo.
I-Apple neMicrosoft bayasebenzisana ukwakha indinganiso entsha ye-USB yamadivayisi we-braille
Ukwenza ubuchwepheshe butholakale kuwo wonke umuntu kungenye yezakhiwo eziyinhloko ubuchwepheshe obukhulu obunazo. I-Apple neMicrosoft bahlanganyele ukuletha indinganiso entsha ye-USB yokuboniswa kwe-braille nokwenza lula ukusetshenziswa kwayo kungakhathalekile ukuthi kunayiphi ingxenyekazi
Ukusayinwa konjiniyela be-Intel abaningana yi-Apple, kuvula impikiswano kwinqubo ye-Mac
Ukusayinwa konjiniyela be-Intel abaningana yi-Apple, kuvula ingxoxo mpikiswano ngabaprosesa be-Mac. Ukuqashwa kokuqala kwenziwa ngoNovemba.
I-Pixelmator Pro ivuselelwa ngenombolo enkulu yezici ezintsha
I-Pixelmator Pro ivuselelwa ngenombolo enkulu yokulungiswa: ukulungiswa kwamabhulashi, ukukhanya, umbala nokugcwala kokugcwala, okuningi kwakho kusuka ku-Touch Bar.
UGurman ukhipha izibikezelo zakhe zeWWDC futhi azikho i-hardware kuzo
Ngaphandle kokungabaza kuyinto engabuyi kithi futhi ukuthi ezimweni eziningi ezedlule ...
I-Apple ivala isivumelwano sokuqopha uchungechunge mayelana nembongi u-Emily Dickinson
Kuze kube namuhla, futhi njengoba sifundile kwabezindaba ezahlukahlukene, ikakhulukazi ekushicilelweni okuhlukahlukene, i-Apple ine ...
Ukunwetshwa kwehhovisi likaSanta Clara lakwa-Apple kuyaqhubeka
I-Apple izobe ivala inani elikhulu lamahhovisi eSanta Clara Valley, kunamathuba amaningi abhekwayo, kepha izinhloso nosuku lokuhamba alwaziwa
IMcEnery Convention Centre eSan José iqala ukuthola umhlobiso weWWDC
Isikhungo somhlangano lapho i-Apple izokwethula ezinye zezinto ezintsha ezizovela esandleni se-macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 ne-watchOS 5, seziqalile ukuhlobisa lo mcimbi.
Ukuvuselelwa komlobi ku-version 5 ekugcineni kufika
Uhlelo lokusebenza lomhleli wombhalo wokugcina ekugcineni lubuyekezwa kwi-macOS, ngezindaba zangaphandle, ukuphathwa kwefayela nokubekisa.
I-9 × 33 Podcast: Ukuvuselelwa kwangaphambili kwe-WWDC 2018
Ngobusuku obuyizolo ku- # podcastapple sikhulume kabanzi ngezindaba ze-iOS, i-watchOS ne-tvOS….
Ishaya isipikha esihlakaniphile esine-Siri ebikezelwe i-WWDC 2018
Enye yezimanga zeWWDC 2018 elandelayo ingavela esandleni seBeats nangendlela yesipikha esihlakaniphile ngokuhlanganiswa kukaSiri
ICarPlay yamukelwa ngokwengeziwe eYurophu nase-United States
Ukwamukelwa kweCarPlay ngabasebenzisi kukhuphuke kakhulu eminyakeni yamuva futhi namuhla, uhhafu wezimoto ezithengiswa eYurophu nase-United States zifaka iCarPlay noma i-Android Auto.
Lezi zonke izikhulumi ezihambisana ne-AirPay 2
Abafana baseCupertino banike amandla iwebhusayithi entsha lapho inkampani isinikeza imininingwane eningiliziwe mayelana ne-AirPlay 2, kufaka phakathi zonke izikhulumi ezihambisanayo.
I-Apple yethule isibuyekezo esisha sesoftware sesipikha sayo esihlakaniphile esenza ekugcineni ifinyelele kulokhu ...
Isicelo esisha sivela, sisesigabeni esivela kancane, ukwenza ngokwezifiso ibha yokuthinta ye-2016 ne-2017 MacBook Pro.
I-HomePod izofika eCanada, eFrance naseJalimane ngoJuni 18
Ngokuya nge-BuffFeed medium, i-HomePod izokwandisa ukutholakala kwayo iye kwamanye amazwe amathathu ngoJuni 18: Canada, France nase Germany.
URazer wenza amakhadi akhe emidwebo angaphandle ahambisane ne-macOS
URazer wenza amakhadi akhe emidwebo angaphandle ahambisane ne-macOS futhi aqalise i-Core X, ibhokisi lokufaka i-eGPU ngokuxhaswa kwe-Mac kanye nokuhlangana okuningi.
Okunye ukukhweza kwesikrini se-iMac Pro akuqinile impela
I-Youtuber isitshela ngezinkinga ngokuxhaswa kwe-iMac Pro ethengiswa yi-Apple, okudale inkinga engaphezu kweyodwa ngenxa yokungazi i-Apple.
Okokuqala ibhulashi lesonto. Manje ngabaculi basemgwaqweni baseLondon abamukela i-Apple Pay
Abadlali bakamuva basemgwaqweni bajoyine ubuchwepheshe be-elektroniki bokukhokha obusinikezwa yi-Apple Pay, njengoba kwenza isonto lase-Anglican.
Uhlu lwadlalwayo lwe-Primavera Sound 2018 manje seluyatholakala ku-Apple Music
I-Apple Music yenza sitholakale nge-Apple Music, uhlu lwadlalwayo lwezingoma ezizoba yingxenye yePrimavera Sound 2018, ebanjelwe eBarcelona kusuka ngoMeyi 30 kuya kuJuni 3.
I-Apple izokwazisa ngokuzayo ngezicelo ezitholwe ohulumeni zokuqeda izicelo
I-Apple izobika izicelo ezivela kohulumeni zokususa noma ukuhoxisa izicelo ezitolo ezahlukene zohlelo lokusebenza zenkampani yaseCupertino.
Imisebenzi eSitolo se-Apple esikhungweni semfundo ephakeme yaseSeattle isizophothulwa
Izithombe zokuqala zesitolo esikhulu esilandelayo se-Apple ukubona ukukhanya kuvela eSeattle, lapho i-Apple yakha isitolo esisha ekhampasi yaseyunivesithi.
Funda ukuthi ungalanda kanjani ikhalenda yeNdebe Yomhlaba ku-Mac yakho
Faka ikhalenda yeNdebe Yomhlaba kukhalenda. Ukwenza lokhu, finyelela iwebhusayithi yekhalenda bese ungenisa leli khalenda ekhasini olifunayo.
I-Apple ivala i-Atlantic City Apple Store
I-Apple ithathe isinqumo sokusivala i-Atlantic City Apple Store ngenxa yokwehla kwezokuvakasha. Isitolo se-Apple sesibili ukusivala ngonyaka. Abasebenzi bazothuthelwa kwenye indawo.
Zingaphezu kuka-400 izimoto ezihambisana ne-Apple CarPlay e-United States
ICarPlay iya ngokuya ithandwa kakhulu embonini yezimoto. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangezinye zezici ezifunwa kakhulu. Futhi e-USA sekuvele kunezinhlobo ezingaphezu kuka-400 ezihambisanayo
IMacintosh, ikhebula le-USB C elehlisiwe, izimemo zeWWDC nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Elinye isonto siyiSonto futhi kufanele siphumule kancane phambi kweMac futhi sibone okuvelele kwe ...
Sihlaziya lapho kuzoba khona uhlelo olulandelayo lokusebenza lweMac.Kucatshangelwa amagama amaningi, yize lelo elizuza amandla amaningi yiMojave.
Izinsuku zokulethwa kwama-MacBook Pros angama-intshi angu-13 ngaphandle kwe-Apple Touch Bar zisanda kudlula futhi…
Ukwehluleka kokuqala komsizi we-Alexa we-Amazon sekuvele kufike
Yeka iphutha elenziwa ngu-Alexa, umsizi we-Amazon, phakathi kwezinye izinto eziningi, olawula izipikha ...
Ngabe sizobona iMac App Store entsha ku-macOS 10.14?
Kunamahemuhemu ngokuhlanganiswa kwezitolo ezimbili ze-Apple. Akukwazi ukuthi kuzokwenzekani ku-macOS 10.14, kepha isitolo seMac sidinga ukubuyekezwa kwemodeli yaso.
I-Apple Maps ibhala kabi ezinye izindawo eCanada
Ezinye izindawo zaseCanada zibhalwe igama lesiteshi sokuvota kunegama elijwayelekile ledolobha.
I-Apple inikeza inyanga yokulinga kubasebenzisi abangenayo i-iCloud
I-Apple isiqalile ukunikela ngenyanga yamahhala ye-iCloud kubo bonke abasebenzisi abangenayo indawo yokugcina eyanele ku-iPhone yabo lapho benza isipele.
I-iMac Pro yokuqala engu-18 ebhalwe ekhasini le-Apple's Refurbished
I-iMac Pro yokuqala eyenziwe kabusha eyi-18 ivela esitolo se-Apple Refurbishment Store e-US ngezaphulelo zika-15%
Amafomethi amadala emidiya namadivayisi amadala, ngandlela thile, abuya. IVinyl, ...
IMacOS idlula iClassic OS X njengohlelo lokusebenza olude kakhulu lwe-Apple
IMacOS njengamanje iyisistimu esebenza isikhathi eside kunazo zonke yakwa-Apple eneminyaka engaphezu kwengu-17 ngemuva kwayo, ngemuva kokudlula kwiClassic OS X.
I-9 × 32 Podcast: I-HomeKit, Imibuzo nezimpendulo
Kwi-podcast yokugcina esiyirekhodile phakathi kwethimba leSoy de Mac ne-Actualidad iPhone sikhulume kakhulu ngeKhayaKit.
Iwebhusayithi ye-Apple isiyatholakala ukuphatha yonke idatha yakho ngendlela othanda ngayo
I-Apple isivele inewebhusayithi yayo entsha yokuphathwa kwedatha esebenzayo ngokumelene ne-GDPR. Indlela entsha yokuphatha konke owabelana ngakho nokwazi mathupha lokho okugcinwa yi-Apple ngawe
Abakwa-Apple basebenzisana neVolkswagen ukukhipha ubuchwepheshe bokuzimela bokushayela emabhasini abasebenzi
Inkampani ezinze eCupertino isebenza ngokubambisana neVolkswagen ukudala uhlelo lokushayela oluzimele lwamabhasi
I-Apple Watch Series 3 LTE iyona esetshenziswa kakhulu kumawashi axhunyiwe
I-Apple Watch Series 3 ene-LTE iwashi elixhumeke kakhulu, ngokusho kocwaningo olwenziwe yiCanalys, lapho amawashi angama-59% akulesi sigaba yi-Apple.
Ngalesi sikhathi sizoba nokusakaza bukhoma kwegama eliyisihluthulelo eWWDC
Kuyinto ejwayelekile muva nje kumagama abalulekile enkampani yeCupertino, ukwenza ukusakaza bukhoma, kepha ngemuva ...
Abadali bochungechunge lwe-Once upon a Time olusayinwe yi-Apple ukuphatha ukuqala kabusha kwe- "Izindaba Ezimangalisayo"
Abadidiyeli bamanje be-Once upon a Time, basayinele i-Apple ukuthi banakekele ukuqala kabusha kochungechunge olwenziwe nguSteven Spielberg Izindaba ezimangazayo
IMac eneFusion Drive sekusondele ukuthi ithobele i-APFS
Umphathi wesoftware yakwa-Apple, uCraig Federighi, uchaze nge-imeyili eya kumsebenzisi ukuthi inkampani i…
Ungahlola kanjani izinga lebhethri lama-AirPod ku-Mac
Uma ufuna ukwazi ukuthi ileveli yebhethri yama-AirPods ngeMac, ngezansi sikukhombisa ukuthi singakwenza kanjani ngaphandle kokusebenzisa i-iPhone noma i-iPad.
I-Starbucks idlula i-Apple Pay ngezinkokhelo ze-smartphone
Ubuchwepheshe bokukhokha obungenantambo be-Apple Pay abusetshenziswa kakhulu e-United States, kepha yilobo beStarbucks, okumangazayo njengoba kungabonakala.
Kwethulwa Umqeqeshi we-Apple Watch New Summer Straps
Sethule imichilo emisha, ukuqoqwa kwehlobo kwe-Apple Watch yomkhiqizo Wabaqeqeshi
U-Apple uthumele izimemo ze-WWDC 2018 ngoJuni 4 kwabezindaba
I-Apple isivele ithumele izimemo kwiNgqungquthela Yomhlaba Wonke Yonjiniyela ka-2018 ngoJuni 4 ku…
Ungazifinyelela kanjani ngokushesha zonke izithombe ezigcinwe ezithombeni ku-MacOS
Ngabe ufuna ukufinyelela ngqo futhi kusheshe kuzo zonke izithombe ezisingathwa uhlelo lokusebenza lwe-MacOS Photos? Sizokutshela ukuthi ungakufaka kanjani lokhu kufinyelela ku-Finder
Ungazivumelanisa kanjani izithonjana zedeskithophu ukuze zingabe zisaminyene
Uma ukhathele ukubona ukuthi izithonjana ezikwideskithophu yakho ye-Mac azilandeli noma yikuphi ukuhleleka noma ukuqondanisa, le ndatshana izokukhombisa ukuthi singayixazulula kanjani le nkinga enkulu.
I-Intel iqinisekisa ukwehluka okusha kobungozi beSpecter
I-Intel iqinisekisa ukwehluka okungu-4 kobungozi be-Specter. Abathuthukisi beSoftware banenguqulo ye-beta yengxenye etholakalayo kubo.
U-Obama ugcine esayina iNetflix, eshiya i-Apple eceleni
Lowo owayengumongameli waseMelika usayine isivumelwano neNetflix sokuqondisa uchungechunge lwezinhlelo kanye nemibhalo emayelana nezindaba ezibaluleke kakhulu zobumongameli bakhe.
Izwi elisha likaSiri ne-HomePod entsha eWWDC 2018
Njengoba bengilindele esihlokweni esedlule, iWWDC 2018 yenza izindaba maqondana ...
Ungayihlela kanjani iMac yakho ukuze ivule noma icime
Uyazi ukuthi ungahlela ukuqala okuzenzakalelayo kweMac? Ungahlela futhi ukulala kwabo. Futhi lapha sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani
I-Apple yehla indawo eyodwa kusezingeni le-Fortune 500
Inkampani ezinze eCupertino ibone inkampani kawoyela i-Exxon Mobil idlula i-Apple ngonyaka odlule, yayibeka endaweni yesi-4 njengenkampani enemali eningi.
Izibuko zangempela ze-Apple ezingathandwa ngabathelisi zingangena emakethe ngo-2021
Sibuyele emuva ngezingilazi ezingokoqobo ezingathandwa kwabathengi i-Apple okuthiwa isebenza kuzona, okungenani ...
Ngabe sizobona i-HomePod ethengiswayo engaphansi kwama-euro angama-200?
I-Apple izobe icabanga ukuletha emakethe isikhulumi esingeziwe ku-HomePod. Kusesekuseni kakhulu ukwazi ukuthi kuzoba yisipikha esincane yini, noma kunalokho, isiphetho esiphakeme.
Ungashintsha kanjani usayizi wezimpawu zedeskithophu ku-macOS
Uma ubulokhu ufuna ukushintsha usayizi wezimpawu zedeskithophu ze-Mac yakho, nansi indlela yokukwenza.
IPad, lo ngumbhoshongo abawakha eDubai osuselwa kwi-iPod
Esinye salezo zakhiwo siyaqedwa ngokuqinisekile esizovakashelwa abavakashi abangaphezu koyedwa. Igama lakhe uPad. Itholakala eDubai futhi isuselwa ekwakhiweni kwe-iPod
Ukuxhaswa ngezimali okungu-0%, ukubheja kohlelo olusha, ukuvakashelwa kwe-Apple Store akuvunyelwe eFrance nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
I-Apple's Worldwide Developers Conference isiseduzane, ngakho-ke emasontweni ambalwa ...
Imali ibuyela esitolo esiku-inthanethi se-Apple sase-UK
Ukuxhaswa kwemikhiqizo ye-Apple ngewebhusayithi yase-UK kuyatholakala futhi. Ngokusobala, i-Apple ibifuna ukukhuthaza ukuthengiswa kwemikhiqizo ngenzalo engu-0%
Imichilo yeqoqo le-Apple Watch entwasahlobo iqala ukuguga
Imichilo yasentwasahlobo ye-Apple Watch iqala ukuguga: iLemonade, iDenim Blue noma iRaspberry Ebomvu, ngamagama abo.
Sikufundisa ukuthola i-malware ye-mshelper bese uyiqeda kuma-mac wakho kumasekhondi ambalwa.
Ikhebula lokushaja le-Moshi USB-C Integra kungenye enhle kakhulu yekhebula le-Apple elisemthethweni lekhwalithi yezinto kanye nentengo
Uma i-Mac yakho ingaboni i-hard drive yangaphandle noma imemori ye-USB lapho uyixhuma, nazi ezinye zezizathu ezingenzeka nesisombululo sazo zonke
Abafana abavela eCupertino basanda kufaka idiphozi kwi-akhawunti ebanjisiwe, eyokuqala yokukhokha ...
Iziteshi ze-AirPort base ziqala ukunyamalala kwezinye izitolo
Ukutholakala kweziteshi zezindiza ze-AirPort sekuqale ukwehla futhi namuhla ngeke usakwazi ukuthenga i-AirPort Express, kepha ungathenga i-Extreme ne-Time Capsule ngamayunithi alinganiselwe.
I-Apple ikuthatha ngokungathí sina ukutholakala kwemikhiqizo yayo
Uma sibheka imininingwane enikezwe yi-World Health Organisation, umuntu oyedwa kwabayisikhombisa uhlala ne ...
Le yindawo yokupaka izimoto engaphansi komhlaba e-Apple Park [Ividiyo]
Sekushicilelwe ividiyo ekhombisa ukungena nokupaka ngaphansi komhlaba kwe-Apple entsha ...
Amaprosesa wokuqala we-Intel ane-32GB LPDDR4 RAM afika
Siyabazi abaprosesa bokuqala be-32GB RAM ngokuqinisekiswa kwe-10nm, okuzobika amandla nokusetshenziswa okuphansi kuma-laptops.
I-Apple Pay iyaqhubeka nokwanda kwayo emhlabeni jikelele futhi isiyatholakala e-Ukraine
Ubuchwepheshe bokukhokha buka-Apple Pay busanda kufika e-Ukraine, ngaleyo ndlela kufezekisa isimemezelo senkampani esikhathini esingaphansi kwenyanga edlule.
Amabhange amasha angama-30 ajoyina i-Apple Pay e-United States
I-Apple Pay iyaqhubeka nokwengeza futhi namhlanje simemezela ukufika kwamabhange amasha angama-30 e-United States, abasebenzisa ...
AbakwaPeepers bazoba nesikhathi esinzima ngalesi sihlungi sesikrini saseKensington seMacBook Pro
UKensington wethula isihlungi seMacBook Pro esivimbela ukubuka amehlo futhi sinciphise ukukhanya okukhanyisa kakhulu emehlweni ethu.
I-Apple ifuna izindawo eNyakatho Carolina naseVirginia ukwakha ikhampasi entsha
Inkampani ezinze eCupertino ihlola izindawo ezimbili e-United States, ukwakha ikhampasi entsha ye-R & D.
I-Apple inwebisa amasheya ka-2012 nango-2013 MacBook Pro
Izinkinga zokushintsha ibhethri leMacBook Pro ka-2012 nango-2013 ziqala ukuxazululwa, i-Apple ibe nesitokwe futhi
Ungayisetha kanjani imidwebo yama-albhamu wethu we-iTunes njengezikrini
Uma unelabhulali enkulu ye-iTunes, ungahle uthande ukusebenzisa imidwebo ekuma-disc akho njengesikrini sakho.
Ungazi kanjani ukuthi uyidale nini i-Apple ID yakho
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi belungakanani usuku lokudalwa kwe-ID yakho ye-Apple? Sikufundisa ukuthi ukuthole ngokusebenzisa i-iTunes nomlando wakho wokuthenga
UTim Cook uqinisekisa abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-50 ku-Apple Music
Kade sikhuluma isikhathi eside ngabasebenzisi i-Apple Music abanayo nokufika kwe-50 figure ...
Ungayenza kanjani ngokwezifiso idatha ekhonjisiwe lapho udala oxhumana naye omusha
Uma izinkambu eziboniswa ngokuzenzakalela ngaso sonke isikhathi lapho senza oxhumana naye omusha zinganele, kule ndatshana sikukhombisa ukuthi singayandisa kanjani noma siyinciphise kanjani leyo nombolo.
Ungayifaka kanjani inombolo yesonto kuhlelo lokusebenza lweKhalenda
Uhlelo lokusebenza lwe-MacOS Calendar lusivumela ukuthi silungiselele uhlelo lokusebenza ukusikhombisa inombolo yesonto esikuyo
Vimbela uhlelo lwekhalenda ekusaziseni ngamaholide nezinsuku zokuzalwa
Uma sikhathele ukuthola izexwayiso ekhalendeni lethu ngezinsuku zokuzalwa noma ngamaholide, ngezansi sizokukhombisa ukuthi ungawavula kanjani womabili amakhalenda.
ICanal + France ihlinzeka nge-Apple TV 4K njengenye indlela yokusetshenziswa kwekhodi yesiteshi
I-Apple neCanal + France bafinyelela esivumelwaneni sokuqasha i-Apple TV 4K ukubukela izinsizakalo zesiteshi saseFrance, esikhundleni se-decoder yendabuko.
Ungayisebenzisa kanjani iSiri kwi-Mac yakho ukuze ukhiqize ngokwengeziwe
ISiri ekuMac ingaba ithuluzi elikusizayo nsuku zonke. Sizokunikeza eminye yemisebenzi ongayinikela kumsizi we-Apple
Ungayivimba kanjani iMeyili ukuthi ingalayishi izithombe ezikude zama-imeyili futhi ngalokho ibavimbele ekusilandeleni
Ngenxa yendlela iMeyili eyenza sitholakale ngayo, singavimbela abathumela ama-imeyili ukuthi bazi ukuthi siwafundile yini ama-imeyili abo.
Uhambo lwezingane lwe-Apple Store aluvunyelwe eFrance
Lokhu ngokungangabazeki kuyizindaba ezimangazayo ngezizathu eziningana kepha okusobala kakhulu ukuthi zivimbela ...
IPhini likaMongameli we-Apple uLisa Jackson uthola umklomelo ngokunakekela imvelo
ULisa Jackson no-Apple bathole umklomelo we-Environmental Achievement Award ngokusebenzisa amasu aluhlaza kuketanga lokukhiqiza lika-Apple
Inani lezimoto ezizimele zakwa-Apple eCalifornia lidlula ama-XNUMX
Inkampani ezinze eCupertino iphinde yandisa inani lezimoto ezikhona njengamanje ezisakazwa eCalifornia, zafinyelela kuma-55.
USiri no-Alexa akusengamagama afunwa obaba nomama ngamadodakazi abo
Konke okuphathelene nabasizi bezwi kuguquka ngendlela echazayo futhi singa ...
Lapho ikhalenda selingasasebenziseki, okungcono kakhulu esingakwenza ukulisusa kuhlelo lwethu lokusebenza lwekhalenda.
UTim Cook ubamba iqhaza ekuthwesweni iziqu eDuke University, lapho afunda khona, futhi unxusa abafundi ukuthi bazimele izimiso zabo.
U-0% wezimali oxhasa imali kwa-Apple uphela kule nyanga
Ukuxhaswa kwemali kwe-Apple ngo-0% kuphela ngoMeyi, ngakho-ke uma ubucabanga nge ...
Ngemuva kwemiphumela yakamuva yakwa-Apple, usopolitiki ucela i-Apple ukuthi yehlise amanani entengo
Usopolitiki uRalph Nader, ubhalela uTim Cook incwadi, enza ukucabanga okuthile ngokuthengwa kabusha kwamasheya noma ezinye izindlela zokwenza lo msebenzi.
ICarpool Karaoke iyatholakala kuhlelo lokusebenza lwe-Apple TV mahhala
I-Talent Show Carpool Karaoke izotholakala ohlelweni lwe-Apple TV TV. Siyazazi izindaba lapho ukuqoshwa kwesizini yesibili kuqala
I-Homepod, i-Apple Watch ezungeze i-Apple Pay, i-drones nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Sinezinsuku eziyi-13 zokuqala zenyanga kaMeyi ezidlulile futhi iwashi lesikhathi alisebenzi ...
I-Apple ibhekene nezinsolo zesigaba sokusebenza ngokusebenza kwamakhibhodi we-MacBook Pro
I-Apple ibhekene necala lesenzo sekilasi ngaphezulu kokungasebenzi kahle kuka-2016 no-2017 MacBook Pro keyboard
Uhlelo lokusebenza lweNike + Run Club Audio Cheeers lubuyekezwa ku-Apple Watch
I-Apple ivuselela ama-Audio Cheers, umsebenzi ofakwe ku-Nike + Club ekuvumela ukuthi ukhuthaze ngaphambi kokwenza umsebenzi wokuzivocavoca bese wabelana ngawo nomngani.
I-Apple Watch isindisa impilo entsha
Akusikhona okokuqala, futhi kubonakala sengathi akusona isikhathi sokugcina lapho sinanela khona isaziso lapho ...
Ungasiguqula kanjani isikrini sakho se-Mac sibe mnyama nokumhlophe
Ngabe udinga ukusebenza nesikrini se-Mac kokumnyama nokumhlophe? IMacOS inesici se-serial esivumela ukuthi usebenze ngaleyo ndlela. Lokhu kugxile kubantu abanezinkinga zokubona
Ungathumela kanjani amanothi kufomethi ye-PDF
Eminyakeni yamuva, uhlelo lokusebenza lweNothi seluphenduke ithuluzi elihle kakhulu okufanele sonke silicabangele ...
Ukwakhiwa kwesikhungo esisha sedatha e-Ireland kukhanseliwe
I-Apple isanda kumemezela ukwesulwa kwephrojekthi entsha yokwakhiwa kwedatha e-Ireland, ngemuva kwakho konke ...
IGoogle isebenza ngewatchwatch yayo ezokuza nePixel 3
Isikhondlakhondla sosesho sisebenzela ukwethula okungaba yiwatchwatch yayo yokuqala emakethe, iwatchwatch ezoba yingxenye yomndeni wePixel.
I-Apple ifuna ukunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya ekukhiqizeni i-aluminium
I-Apple idala i-Elysis, ukunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya ekukhiqizeni i-aluminium, kanye nabakhiqizi ababili abakhulu be-aluminium emhlabeni jikelele
AbakwaSamsung baphinde balungiselela izingilazi ze-AR ne-VR ukumelana ne-Apple futhi zingathulwa kulo nyaka
AbakwaSamsung bangaphambi kwe-Apple futhi bangethula kulo nyaka ukuzibophezela kwabo kwizingilazi ze-AR ne-VR. Ngaphezu kwalokho, ubezobambisana neMicrosoft ngalokhu kubheja
UGoldman Sachs angethula ikhadi lesikweletu le-Apple Pay
UGoldman Sachs no-Apple Pay bazobe bephothula isivumelwano sokuthola ikhadi le-Apple Pay, kanye nokuxhasa ngemali labo abathola amadivayisi we-Apple
Ukunwetshwa kwezinsizakalo zokubhalisa kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-TV
I-Apple imemezele ngombiko ukwandiswa kwezinsizakalo zokubhalisela uhlelo lwayo lwe-TV ku-Apple ...
I-Podcast 9 × 31: IGoogle ifinyelela uSiri ngakwesokudla
Isiqephu sakamuva se-Apple podcast sigxile cishe kuphela ku-Google I / O yokugcina lapho iGoogle isibonise khona cishe yonke imisebenzi emisha ezofika maduzane kuzinsizakalo nezinhlelo zokusebenza zeGoogle.
Lokhu ungakwenza ngohlelo lokusebenza lwe-MacOS Switcher
Uhlelo lokusebenza lwe-Switcher lusebenza ekuqaleni kwe-MacOS futhi liletha izici eziningi ezifihliwe ngaphandle kokushintshanisa phakathi kwezinhlelo zokusebenza
I-Apple ivula isikhungo esisha sonjiniyela eJakarta
Abafana baseCupertino basanda kuvula isikhungo esisha sonjiniyela eJakarta, sibe sesithathu i-Apple esinikeza abathuthukisi abangaphandle kwe-United States.
Izimvume ezikhethekile zezindiza ze-Apple?
Akungabazeki ukuthi ngemuva kwakho konke ukuxokozela okwenyuswa yizindiza ze-drone e-Apple Park ...
Khiya i-Mac yakho ngesinqamuleli sekhibhodi ku-MacOS High Sierra
Kusobala ukuthi uhlelo lwe-Mac lune-interface enviable nokuthi inembile kakhulu, kepha kunezikhathi ...
Dala uhlu oluphelele lwezinhlelo zokusebenza ozifakile ku-Mac yakho
Ingabe ufuna uhlu lwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe kwi-Mac yakho? Sizokunikeza izindlela ezimbili. Zombili zisebenzisa iTheminali. Futhi enye yazo izoba uhlu olulula enye ibe nemininingwane
UJony Ive ukhuluma nge-Apple Watch: "Konke esikwenzile besicabanga ngesixazululo esihle kunazo zonke"
UJony Ive unikeza ingxoxo lapho ekhuluma khona ngomnikelo ekwakhiweni kwe-Apple Watch nokuthi imeleni namuhla
Ungashintsha kanjani usayizi wezimpawu zebha eseceleni ku-macOS
Uma ubulokhu ufuna ukushintsha usayizi wezimpawu kubha eseceleni, kule ndatshana sikukhombisa ukuthi singakwenza kanjani ngokushesha nangendlela elula.
URalph Lauren umemezela ukusayinwa kuka-Angela Ahrendts kwiBhodi Yabaqondisi
UTim Cook umemezele ukuqashwa kuka-Angela Ahrendts, ngo-Okthoba odlule 2013, owayeyi-CEO ...
Ungazivala kanjani izithombe nokugqama ku-MacOS High Sierra
Uma senza kungasebenzi ukugqwayiza nokusobala kwekhompyutha yethu ephethwe yi-MacOS High Sierra, ukusebenza kwayo kuzoshesha.
I-Google Home neKhaya Mini lizofika eSpain kuwo wonke lo nyaka, njenge-Amazon Echo
Konke kubonakala kukhombisa ukuthi lo mncintiswano uzophinde ube phambili kwe-Apple futhi izipikha zokuqala ezihlakaniphile ezivela kuGoogle naseAmazon zizofika eSpain ngaphambi kweKhaya Lasekhaya le-Apple.
IFinal Cut Pro X yehluleka ukuphumelela eHollywood njengomhleli wevidiyo
IFinal Cut Pro X ayiphumeleli eHollywood njengoba kwenza i-Avid's Media Composer. Ukuzivumelanisa nefilosofi yakhe kubonakala kuyisizathu esiyinhloko.
Iqembu lokushicilela likaCondé Nast liyakuphika ukuthengiswa kwe-Apple
Iqembu lokushicilela iCondé Nast likuphikile ukuthi lihlose ukuzithengisa kwa-Apple, manje noma ngokuzayo, yize ikusasa kuyinto engakhulunywa ngayo ngokuqiniseka okunjalo.
Ungayisebenzisa kanjani i-Mail Drop kuma-akhawunti angewona we-ICloud
Ngabe ufuna ukusebenzisa insizakalo ye-Mail Drop kuma-akhawunti ngaphandle kwe-iCloud? Lapha sikukhombisa ngezinyathelo ezimbalwa ukuthi ungayisebenzisa kanjani inketho usebenzisa Imeyili ye-macOS
UBill Gates uthi i-Apple yinkampani emangalisayo
Enye yezimbangi ezinkulu zika-Apple phakathi neminyaka yayo yokuqala kwakunguMicrosoft. UBill Gates, umsunguli weMicrosoft usayine ukuthi i-Apple inkampani emangalisayo.
Abanye abasebenzisi be-Apple Watch bathola izimemo ku-Apple Heart Study
Abasebenzisi ababhalisele i-Apple Heart Study ehlelwe yiStanford University bathola izimemo zabo zokuqala ze-imeyili.
I-HomePod izokwazi ukuphatha ikhalenda lethu ngesibuyekezo esilandelayo se-iOS
Phakathi kwemininingwane etholwe abanye abathuthukisi bama-betas we-iOS 11.4 wokuqala, sithola ithuba lokuphatha ikhalenda lethu.
Ukuphathwa kweqembu kuholela kuCardhop, nokuvuselelwa kwayo kokuqala okukhulu
Umphathi wokuxhumana weCardhop uvuselelwa enguqulweni 1.1 ngokuthuthuka ekuphathweni kokuxhumana okukhaliphile nokufakwa kwezilimi ezintsha.
Amasheya e-Apple akhuphuka futhi aphula irekhodi lawo: $ 186,88 ngesabelo ngasinye
Akungabazeki ukuthi lokhu kuyinkomba ecacile yokuthi i-Apple isempilweni enhle futhi lokho ...
Ividiyo isivumela ukuthi sibone ingaphakathi lepaki yezimoto i-Apple Park
Sithola ividiyo entsha ye-Apple Park, ikomkhulu elisha le-Apple. Kodwa-ke, kulokhu kuyividiyo engaphakathi kwendawo yokupaka izimoto
Imiphumela emihle yabadlali abasebenzisa ama-Nvidia eGPU kuma-macOS
Siyazi ngesisombululo esingekho emthethweni sokusetshenziswa kwamaNvidia eGPUs asesigabeni se-Alpha. Kugqamisa ubulula nokusebenza okuphelele.
Ama-patches amasha we-Intel chip asendleleni
I-Intel isiqinisekisile kithi ukuthi isebenza emapaki okuphepha ukulungisa ukwehluleka okuningi kwemiklamo yeChips, okufana namapaki eSpecter neMeltdown
Ungashintsha kanjani indawo yamafayela alandiwe kusuka ku-iTunes
Ngabe ufuna ukushintsha indawo lapho konke okulandwayo okwenzayo nge-iTunes kugcinwa khona? Sichaza ukuthi singakwenza kanjani ngezinyathelo ezilula
Ama-betas amasha we-MacOS, i-MacBook lag, ukunwetshwa kwe-Apple Pay, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Isonto elifushane labaningi kwazise amanye amaholidi adlulile futhi sibuye ngeSonto. Lokhu…
Isenzo se-Apple siyabuya ukumaka ubuningi, ngemuva kokulethwa kwemiphumela
Isitoko sika-Apple asikayeki ukukhula selokhu kwethulwe imiphumela yekota, lapho bephule khona amarekhodi enzuzo. UWarren Buffett uyavuma ukubheja okukhulu ku-Apple
IMercedes-Benz A-Class 2018 izoba neCarPlay engenantambo ohlelweni lwayo olusha lwe-multimedia
I-A-Class 2018 entsha ephuma eMercedes-Benz yaseJalimane ivuselele uhlelo lwayo lwe-multimedia oludidiyelwe. Futhi lena manje isekela i-Apple CarPlay engenantambo
Sekusele inyanga eyodwa kufike usuku lokuqala lwe-WWDC 18, yini esingayilindela kuyo?
Sisondelene ngempela nalokho okuzoba yisihloko sesibili esisemthethweni se-Apple uma sicabangela isethulo se ...
Abasebenzisi bacela i-Apple ukuthi ingene esikhundleni samakhibhodi we-MacBook Pro ahlulekayo
Umsebenzisi ucele i-Change.org ukuthi i-Apple icabangele ukufaka amakhadibhodi we-butterfly angalungile ku-MacBook Pro
Umkhiqizo uqala ochungechungeni lwe-Are You Sleeping olingisa u-Octavia Spencer
Ukukhiqizwa kolunye uchungechunge lwe-Apple uqobo, Ingabe Ulele kuvele sekuqalile isigaba sokukhiqiza, uchungechunge olulingisa umlingisi u-Octavia Spencer
Ungashintsha kanjani usayizi wezithombe eziningi kanye nokubuka kuqala
Enye inketho i-Preview esinikeza yona, siyithola inethuba lokukwazi ukushintsha usayizi wezithombe ndawonye.
Zama isihleli sombhalo esisebenzisanayo, ngokuya ngeMarkdown
I-Strike uhlelo lokusebenza lomhleli wombhalo olulula noluncane, kepha inezinketho zokuthuthuka ezithuthuke kakhulu njengeMarkDown
Kuleli sonto sibe nobunzima ngoLwesibili ebusuku sisebenzise i- # podcasapple ngoLwesithathu kepha njengoba wazi cishe ...
Ifemu yaseSweden isanda kumemezela izibalo zakamuva zenombolo yabasebenzisi abakhokhelwayo kanye nenguqulo yamahhala, efinyelela kubasebenzisi abayizigidi ezingama-75.
Amabhange amasha ahambisana ne-Apple Pay e-Australia, e-United States, eTaiwan ...
Abafana baseCupertino bandise inani lamabhange nezikhungo zezikweletu ezihambisana nobuchwepheshe bokukhokha okungenantambo buka-Apple, i-Apple Pay
INorway, iPoland ne-Ukraine bazothola i-Apple Pay ungakapheli unyaka
Njengoba uTim Cook ngokwakhe ememezele, engqungqutheleni yemiphumela yezomnotho, iNorway, iPoland ne-Ukraine kuzoba amazwe alandelayo i-Apple Pay ezofinyelela kuwo.
Kusuka ku-Apple TV futhi ungaphatha okubhalisile futhi kwenziwa kanjalo
Ubuwazi ukuthi okubhaliselwe okutholayo nge-ID yakho ye-Apple nakho kungaphathwa nge-Apple TV? Lapha sichaza ukuthi kulula kanjani
Izimoto zakwa-Apple Maps, zikhona emazweni angaphezu kwayishumi
Izimoto zakwa-Apple ziyaqhubeka nokuqoqa idatha yekusasa le-Apple Maps. Lolu lwazi kungenzeka lusetshenziswe kumamephu kuma-macOS alandelayo.
I-Apple ishicilela imiphumela yezezimali yekota yesibili yonyaka wezimali
Abakwa-Apple baqale ukusebenza izolo futhi basinika imiphumela yezimali etholwe kulekota yesibili ...
I-beta yesithathu ye-tvOS 11.4 ne-watchOS 4.3.1 manje isiyatholakala konjiniyela
Abafana abavela eCupertino sebethule kanye ne-beta yesithathu yonjiniyela be-macOS 10.13.5, i-beta yesithathu nayo ye-tvOS 11.3 ne-watchOS 4.3.1
I-beta yesithathu ye-macOS 10.13.5 yonjiniyela isiyatholakala
I-beta yesithathu ye-macOS 10.13.5 isivele itholakala, yize okwamanje, kuphela kubathuthukisi, yize kungenzeka kakhulu ukuthi inguqulo yabasebenzisi be-beta yomphakathi izokhishwa usuku lonke.
I-Apple ingaba nentshisekelo ekuthengeni iqembu lokushicilela uCondé Nast
U-Apple angaba nentshisekelo yokuthenga ingxenye noma zonke izihloko zeqembu lokushicilela leCondé Nast, elingadluli kwesinye sezikhathi zalo ezinhle kakhulu
Ividiyo entsha ye-drone ye-Apple Park esisinikeza ukubukwa okumangazayo
Enye ividiyo entsha ivele ku-YouTube lapho singabona khona, ngokuningiliziwe, ukuthi imisebenzi ye-Apple Park iqediwe kanjani ngokuphelele.
Kungani ngikwazi ukubona okunye engikubhalisile ku-iTunes
Kungenzeka ukuthi ngeke ubone konke okubhalisele ku-iTunes. Sikutshela ukuthi kungaba yini izimbangela zokuzibona kwakho ohlwini lwakho
Izithuthukisi zikaPalo Alto Apple, ukunwetshwa kweHomeKit, uTim Cook noDonald Trump ukuhlangana, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Njengawo wonke amaSonto, sifika ngokuhlanganiswa okusha kwezindaba ezithandwa kakhulu kuleli sonto eziphela namuhla. Impela kusasa ...
Isitolo i-Lehigh Valley Apple Store Sithuthele Endaweni Enkulu
Ukufuduswa kwesitolo iLehigh Valley Apple Store kuhlelwe kulo lonke i-2018. Ngalesi sikhathi, bathutha ukuze babe nendawo ethe xaxa yezitolo.
IFarrago, uhlelo lokusebenza lwePodcasters, ivuselelwa ngokungeza Imodi Emnyama
IFarrago, uhlelo lokusebenza lwePodcasters, isanda kuvuselelwa ngezinto ezintsha, kufaka phakathi imodi emnyama.
I-Lexus sedan isivele ine-Apple CarPlay kusikrini sayo esingu-12,1 ″
ICarPlay ifana kakhulu ne-Apple Pay, ukusatshalaliswa kwayo nokwethulwa kwayo kuhamba kancane kuneziningi ...
I-32GB RAM MacBook Pro ngeke itholakale kuze kube ngu-2019 okungenani
I-Intel imemezela ukubambezeleka okusha kuma-processor we-10nm Cannon Lake, azothwala ngokubonakalayo ama-MacBook Pros wesikhathi esizayo futhi avumele ukufaka i-32GB ye-RAM
Ungayilanda kanjani ikhophi layo yonke idatha i-Apple eyaziyo ngawe
Ngabe ufuna ukulanda idatha eqoqwa yi-Apple ngawe? Siyakuchazela, igxathu negxathu, ukuthi kufanele uqhubeke kanjani
UTim Cook uthole umhlangano eWhite House uwusizo
Isikhulu esiphezulu ekuphathweni kukaTrump, uLarry Kudlow, uphawule ngengxoxo evumayo phakathi kukaCook noTrump. KuTim Cook umhlangano ubewusizo.
Umkhakha wobuchwepheshe uyaqhubeka nokukhetha amadivayisi we-MacOS ne-iOS
Isifundo semakethe iJamf, sisanda kukhipha izibalo zombiko wonyaka futhi kulokhu ungabona ...
ISonos imemezela ngokusemthethweni ukuthi yimiphi imikhiqizo ehambisana ne-AirPlay 2 ezoba
Ezinyangeni eziyi-7 ngemuva kokumemezela ukuhambisana kwemikhiqizo yayo ne-AirPlay 2, inkampani yakwaSonos ikuqinisekisile ukuthi yimiphi imikhiqizo ezohambisana nalobu buchwepheshe obuvela kwa-Apple.
Ungakukhubaza kanjani ukulungisa ngokuzenzakalela ku-macOS
Ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa, ukukhubaza ukulungisa okungalungile kwe-MacOS kungaba yindlela engcono kakhulu lapho umqondisi engayeki ukuguqula konke esikubhalayo.
Ungakuhlela kanjani okubhaliselwe kwe-Apple kusuka ku-Mac yakho nge-iTunes
Ngabe ufuna ukufunda ukuthi ungakuphatha kanjani okubhaliselwe kwe-iTunes? Lapha sikushiya isifundo esincane esizokuvumela ukuthi wazi ukuthi mangaki okubhaliselwe okusasebenza, ukuthi ungazikhipha kanjani ohlwini noma ukuvuselela kanjani
Ngabe iMac mini, i-AirPort, ne-iPod Touch kufanele ihambe?
Inani lemikhiqizo esiyithola kukhathalogi ye-Apple namuhla likhulu impela futhi ...
Ungayithola kanjani inombolo ye-serial ye-Mac
Ukwazi inombolo ye-serial ye-Mac yethu kungasivumela ukuthi sazi ngokushesha hhayi kuphela isimo sewaranti ye-Mac yethu, kepha futhi kuvumela i-Apple ukuthi yazi yonke imininingwane yemishini yethu.
I-China etafuleni emhlanganweni kaTrump-Tim Cook
Imininingwane ngomhlangano osehhovisi le-Oval phakathi kukaMongameli wase-United States, uDonald Trump, kanye ne-CEO ...
IBBVA neBancaMarch bamemezele ngokusemthethweni ku-Apple Pay
Futhi okunye okunye okungezwe ku- "Coming Soon" kwe-Apple Pay, i-BBVA neBancaMarch sekuvele kusigaba sewebhu se ...
Ngokushesha i-Apple izoqala ukukhokha inhlawulo yesigidigidi ebekwe yi-EU
U-Apple uzoqala ngenyanga ezayo ukubhekana nenhlawulo ekhishwe yi-EU ekwelapheni ukwenzelela i-Ireland ukufaka intela eyehlisiwe.
Funda ngomsebenzi wokushiya inothi le-MacOS ngaphambili
Funda ukuthi ungagqamisa kanjani inothi ngaphambili ukuze ihlale ibonakala noma ubhale amanothi. Kungenziwa futhi ngamanothi amaningi ngasikhathi sinye.
I-Podcast 9 × 29: Ngabe uvela eFortnite noma ePUBG?
Ngelinye isonto, ithimba leSoy de Mac ne-iPhone Actualidad selihlangane ukukhuluma ngezindaba ezibaluleke kakhulu ezinsukwini zokugcina eziyi-7 ezihlobene ne-Apple nobuchwepheshe jikelele.
UTim Cook noDonald Trump bazohlangana futhi namuhla eWhite House
Nakulokhu futhi, i-CEO ye-Apple kanye nomongameli we ...
E-UK, i-Apple isusa izinketho zezimali
Abasebenzisi abaningi be-Apple babheke udaba lokuxhaswa kwemali komkhiqizo ngokungakhokhi konke ...
I-Apple ikhokha ngaphezu kwamaRandi ayisigidi nge-documentary ngempilo ka-Ed Sheeran
Ekupheleni konyaka odlule, uzakwethu uJordi ukwazise ngezingoma ezilalelwa kakhulu ngale nsizakalo ...
Ikhophi yasekuqaleni yesikhangiso se-beta sango-1984 sakwa-Apple likhuphukela endalini
Indali yakamuva yomkhiqizo ohlobene ne-Apple, sayithola kutheyipu yokuqala yevidiyo ka-1984 ye-Apple ngefomethi yeBetamax
Ungazivula kanjani izixhumanisi ngokushesha kusuka ku-Spotlight
Ukugqama kuyithuluzi elinamandla elikuvumela ukuthi usebenze ngokunethezeka nge-Mac yakho.Lokhu sizocacisa ukuthi ungazivula kanjani ngokushesha izixhumanisi ngaleli thuluzi
Uma ukhathele ukubona ukuthi isiphequluli sakho sazi kanjani kakhulu ngomlando wakho wokusesha kunawe, isikhathi sesifikile sokususa amakhukhi kwisiphequluli sethu.
Kulabo abangazi, i-Aqara iwumkhiqizo wemikhiqizo yasendlini futhi ingaphansi kwesambulela ...
IPalo Alto Apple Store nayo izothola ukuthuthuka
Izitolo zakwa-Apple emhlabeni wonke ziyashintsha ngokulungiswa okukhulu nokwenza ngcono. Kuleli sonto i-Apple imemezele okumangazayo ...
I-MacOS inenketho ye-Image Markup kepha ikhutshaziwe
Inketho yokuDayela kwe-iOS iku-MacOS kepha ikhutshaziwe. Ukuze uyisebenzise, ​​kufanele uye kuzandiso zokuncamelayo kwesistimu.
Ukuvuselelwa kwe-FFmpeg enguqulweni yesi-4 kusilethela ukufakwa kwe-H.264 kuze kube kasikhombisa ngokushesha, ngenxa yokusetshenziswa kwemidwebo esikhundleni seprosesa.
Sikunikeza ezinye izindlela ezahlukahlukene zokufihla i-IP kwi-Mac. Lezi zinketho zisebenzisa ama-proxies, ama-VPN noma iziphequluli ze-inthanethi ngezinketho ezithokozisayo ezizokuvumela ukuthi ubhekabheke ngasese futhi ngaphandle kokushiya umkhondo.
Enye yezinkinga umuntu engisebenza naye angikhulise ngayo namhlanje ekuseni ngoku-oda kwama-desk ...
Ungayifaka kanjani iJava ku-MacOS High Sierra
Ezinguqulweni zakamuva ze-macOS, i-Apple isuse ukuxhaswa kweJava natively, ngakho-ke kufanele siye kuwebhusayithi ye-Oracle ukulanda isoftware yeJava ukudlala okuqukethwe okwenziwe ngalolu limi.
U-Apple uhlele iBeer Bash ukugubha uSuku Lomhlaba Lomhlaba lapho abaculi abahlukahlukene, okubalwa kubo noZiggy Marley, bebambe iqhaza khona.
I-Apple Pay, i-MacOS beta 2, Usuku Lomhlaba, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Inyanga iyaphela futhi singena evikini lokugcina lika-Ephreli. Into enhle ukuthi…
Ukulinganiswa kwama-Macs aphathekayo kuyawa, ngokusho kocwaningo
Ama-Macs aphathekayo awela ekulinganisweni, ngokusho kocwaningo olwenziwe yiLaptop Mag.
I-Apple Watch enesaphulelo noma idrayivu ye-SSD phakathi kwamadili we-eBay we-Super Weekend
Ngaphandle kokungabaza, kufanele sinake okunikezwayo okungenzeka esikuthola kunetha naku-com ...
UMicintosh Icon Designer uSusan Kare, Ophumelele Award Award Winner
USusan Kare, umklami wesithonjana se-Mac sakudala, uhlonishwe ngomsebenzi wakhe wonke, umsebenzi omenze wangenela izinkampani ezinkulu zobuchwepheshe.
Thola ukuthi ngabe i-akhawunti yakho ye-imeyili ingene ngokungekho emthethweni sibonga ukuthi "ngabe ngidlalisiwe?"
Ngaphandle kokungabaza kungenzeka kakhulu ukuthi amanye ama-akhawunti wakho we-imeyili ahlukumezeka ngesikhathi esithile ...
Ukwenza ngcono imvelo, ukhiye embikweni wokuzibophezela kwe-Apple kwezemvelo
I-Apple iyaziqhenya lapho yenza iphrojekthi ngayinye futhi kuyasiza ekuthuthukiseni umkhondo wayo wezemvelo. Umbiko Wenkampani Wezemvelo uhlanganisa nezenzo ezimbalwa.
Ukuhlolwa nge-macOS 10.14 ne-iOS 12 kuyaqina
Njengoba sonke sesivele sazi ukuthi izinguqulo ezintsha ze-Apple OS ziyeza nini, inkampani iqala ukuzisebenzisa kusuka ...
Ukuhlanganisa i-MacOS ne-iOS akukho ezinhlelweni zikaTim Cook
UTim Cook ukuqinisekisile kwinhlolokhono yakamuva ukuthi akahlelile ukuhlanganisa iMacOS ne-iOS, njengoba bobabili behambisana. Sizobona ukuthi kwenzekani ngohlelo lweMarzipan lokuhlanganiswa kwezicelo zalezi zinhlelo ezimbili.
U-Liam, irobhothi lakwa-Apple selivele linomlingani ogama lakhe linguDaisy
Irobhothi elisha lokuqaqa lika-Apple, iDaisy, liyindlela ephumelela kunazo zonke yokubuyisa izinto ezibaluleke kakhulu ezigcinwe ku ...
Okokufundisa kokuthi ungayithola kanjani kabusha iphasiwedi ye-Wi-Fi ngosizo lohlelo lokusebenza lwe-MacOS Keychains ngezinyathelo ezimbalwa ezilula
I-Podcast 9 × 28: Ukwehluleka kwe-Apple
Ngelinye isonto siletha isahluko esisha se- # podcastapple yethu futhi kuleli sonto besikulangazelela ngemuva kwezithandani ...
Izinto 3.5 zilapha, kuqhubeka nokwenza ngcono ukuphathwa kwemisebenzi
Izinto zifinyelela kunguqulo engu-3.5 engeza imisebenzi emisha efana nemisebenzi yamakhophi bese yakha umsebenzi kulayini ngamunye noma wenze ngokwezifiso amamenyu
I-Apple Music izokhula ngama-40% minyaka yonke ngokusho kwabahlaziyi
Yize kuliqiniso ukuthi lokhu ukucabanga okugcwele, asikwazi ukuphika ukuthi ukukhula kuka-Apple ...
Ungakushintsha kanjani ukukhanya kwekhibhodi ngokuzenzakalela ku-Mac
Namuhla sizobona ukuthi singakulungisa kanjani ukukhanya kwekhibhodi yeMacBook Pro, iMacBook Air kanye ...
I-Apple ihlela ukwethula insizakalo yezindaba zokubhalisa nge-Apple News
I-Apple kungekudala izokwazi ukuhlanganisa uhlelo lweTexture kwinkonzo yayo ye-Apple News futhi ngaleyo ndlela inikeze insizakalo yezindaba zokubhaliselwe
Ungayisula kanjani ingxenye yomlando weSafari ku-Mac
Uma kunoma yisiphi isikhathi uphoqeleka ukuthi ususe kuphela ingxenye yomlando noma amakhasi wewebhu athile, kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani ngaphandle kokukususa ngokuphelele.
Abakwa-Adobe bathenga iSaysprings ukuhlanganisa ubuchwepheshe bezwi ezinhlelweni zayo
Abakwa-Adobe bathenga inkampani yakwaSayspring ezinikele ekwakhiweni kwezinhlelo zokusebenza lapho ngezwi, zihlanganiswe nezinhlelo zokusebenza ezibonakalayo ezifana ne-Aleza noma i-Google Assistant
I-Apple Leases Office Space eSeattle yabasebenzi abangama-475
Abafana baseCupertino babheke ukukhulisa ukutholakala kwabo eSeattle, lapho inkampani okwamanje ithuthukisa uhlelo lwayo lobuhlakani bokuzenzela.
Amabhange aseMelika amasha eCanada, e-Italy naseChina ajoyina i-Apple Pay
Insizakalo ye-Apple Pay inwetshelwa izinhlangano eziningi emazweni afana ne-Italy, Russia, China. ESpain iCajaRural ne-EVO Banco ziyangezwa futhi ezinyangeni uBankia noBanco Sabadell.
Ungayisusa kanjani ifonti ku-Mac
Izolo nje sibone ukuthi singakhubaza kanjani ifonti ku-Mac yethu kwizithandani ...
I-Apple Music ilahlekelwa yinhloko yeR & B neHip-Hop, iya kuSpotify
Indoda ebhekele ukwelashwa uhlelo lokukhiqiza nakho konke okuqukethwe okuhlobene ne-Hip-Hip ne-R & B isanda kumemezela ukushiya kwayo i-Apple Music iye e-Spotify futhi igcwalise isikhundla esifanayo.
ICaja Rural isiyatholakala ku-Apple Pay
Kwizengezo zakamuva ezizomenyezelwa i-Apple Pay kulezi zinyanga, iCaja Rural ibe ngeyokuqala ukufika futhi…
I-BetterTouchTool uhlelo lokusebenza olwenziwe ngezifiso lwe-Mac luza ku-Setapp
Uhlelo lokusebenza ngokwezifiso lwe-BetterTouchTool Mac luvumela izinhlobo ezahlukahlukene zokubhaliselwe. Okusha insizakalo yeSetapp.
Indiza ye-Drone phezu kwe-Apple Park. Kuya ngokuya kuba nzima ukundiza ngaphezulu kwendawo
Siphinde saba nevidiyo ethathwe nge-drone ye-Apple Park futhi kulokhu singasho ukuthi ...
I-AMD Radeon RX 580 eGPU inikela ngaphezu kokuphindwe kabili kwejubane leMacBook Pro
Ukuhlolwa kokuqala ukuthola ukuthuthuka kokusebenza ngokusetshenziswa kwe-eGPU kuma-Macs ngenxa yeMacOS High Sierra 10.13.4 kanye ne-AMD Radeon RX 580 eGPU, shiya okuvelele nezithunzi
I-trackpad ye-Macbook ayisebenzi uma unegundane langaphandle? Nasi isixazululo
Ngabe i-trackpad yakho eyakhelwe ngaphakathi ye-MacBook iyayeka ukusebenza lapho uxhuma igundane elingenantambo noma i-trackpad? Isixazululo silapha
Ungayiguqula kanjani i-PDF yombala ibe mnyama nomhlophe noma i-grayscale ku-Mac ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ezivela eceleni
Uma sifuna ukunciphisa usayizi wedokhumenti ngefomethi ye-PDF efaka izithombe, isisombululo esihle kakhulu ukuyiguqula ibe mnyama nomhlophe.
Khubaza kalula ifonti ku-Mac yakho
Ukufaka ifonti ku-Mac yethu kuyinto esingayenza kalula kukhompyutha yethu futhi ngaphezu kwe ...
Amathuba okudayela izinkampani zangaphandle ku-Apple Watch akhonjiswa ku-watchOS 4.3.1
Ngokuhlaziywa kwe-beta kwe-watchOS 4.3.1, kunengxenye yekhodi yohlelo ekhombisa ukwenziwa kobuso bewashi lomuntu wesithathu
I-Apple izolungisa izinkinga zebhethri ze-Apple Watch Series 2 mahhala
Inkampani ezinze eCupertino isimemezele ukuthi izothatha indawo yawo wonke ama-Apple Watch Series 2s ngezinkinga zebhethri ledivayisi mahhala.
Faka ezemidlalo ezintsha kuhlelo lokusebenza lwe-Apple Watch Workout
Ungayengeza kanjani eminye imidlalo kuhlelo lokusebenza lwe-Workout ku-Apple Watch ukwenza umsebenzi ohlukile kunalowo ochazwe ngaphambilini futhi ulungise ukuqeqeshwa kwakho.
Ungayisebenzisa kanjani enye i-CD noma i-DVD drive yekhompyutha yakho kwi-Mac yakho
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-CD noma i-DVD yenye ikhompyutha kwi-Mac yakho? Lapha sichaza igxathu negxathu ukusebenzisa idrayivu ebonakalayo yenye ikhompyutha
I-iPhone 8 (RED), iVimeo kwi-Mac, i-akhawunti kaWoz ye-Facebook nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Leli kube ngempela yisonto elithule ngokwezindaba ezisemthethweni ze-Apple ne-Mac.
Uhulumeni waseRussia ufuna ukuvimba iTelegram uma ungabaniki idatha yakho
Inkantolo yaseRussia iyalele uhulumeni waseRussia ukuthi akwazi ukuthola imininingwane evela kumaseva weTelegram. Isicelo sokuthumela imiyalezo sinqabile ukwenza lokho futhi uhulumeni ucabanga ukukuvimba.
AbakwaSpotify noHulu bayajoyina ukuze banikele ngensizakalo ehlangene ngentengo eyehlisiwe
AbakwaSpotify noHulu bafinyelele esivumelwaneni sezentengiselwano sokunikeza isibonelelo esihlangene sezinsizakalo zombili ngo- $ 12,99 kuphela ngenyanga.
I-Apple CarPlay ifakwe emakethe yezinhlelo ze-infotainment
Ngokwenhlolo-vo yakamuva, i-Apple CarPlay ikhipha esikhundleni izinhlelo zokuphathelene ne-infotainment zemikhiqizo ehlukahlukene. Isivele iyimfuneko ebalulekile ekuthengeni okusha
Ungawahlela kanjani amafayela we-Finder ngokuya ngesandiso sawo
IMacOS isinikeza ithuba loku-oda okuqukethwe kwamafolda eqembu lethu ngezindlela ezihlukile. Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungawa-oda kanjani ngokuya ngohlelo / ukwandiswa kwawo.
Isiteshi sezemidlalo se-ESPN + siza ku-Apple TV, yize sise-US kuphela.
I-ESPN +, isiteshi sezemidlalo senethiwekhi yeDisney, siyatholakala kubasebenzisi be-iOS nabakwa-Apple TV. Isevisi okwamanje itholakala kuphela e-US.
Izikibha eziluhlaza namabhantshi amasha okubungaza usuku lomhlaba
Usuku Lomhlaba luseduze futhi lokhu kuboniswa ekuhambeni kuka-Apple nezinselelo ze ...
Le yi-Startech Mac Dock entsha yokuxhuma izikrini ze-4k
Siyakwazi ukunikezwa kwe-Startech ku-Docks for Mac. Ngokungeziwe kokujwayelekile, sithola amamodeli amabili anokuxhumana okungu-4k ku-60Hz.
Ungayifaka kanjani ifolda yamadokhumenti wakamuva ku-Mac Dock
Ngabe ufuna ukuba nesinqamuleli ku-MacOS Dock ngemibhalo yakho yakamuva, izinhlelo zokusebenza zakamuva, njll. Sikukhombisa ukuthi uyivumela kanjani ngeTheminali
Ungayisusa kanjani idatha yethu ye-Facebook kwi-MacOS
Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile sokuba umhlinzeki wedatha ku-Facebook, ungaqala ngokususa noma imuphi umkhondo we-Facebook ku-Mac yakho ngokwenza lezi zinyathelo ezilandelayo.
I-Apple Maps isekela imininingwane yezokuthutha yaseTennessee
Insizakalo yokuhamba komphakathi yaseTennessee iza ku-Apple Maps. Imigqa yebhasi ejwayelekile iyatholakala kuhlelo lokusebenza
I-Patent troll VirnetX ithatha amanye amaRandi ayizigidi ezingama-500 kwa-Apple
Futhi, i-patent troll VirnetX isendleleni efanele yokukhipha amanye ama- $ 500 wezigidi enkampanini esekwe kuCupertino.
Lawa ama-SSD amasha we-WD anesivinini esivuthayo
I-Western Digital Ingenisa Umugqa Ophelele We-Ultra-Fast Speed ​​SSD Hard Drives ngeThunderbold 3 Connection, ene-2800MB / s Speed
Ungawusesha Kanjani Umlando ku-Safari ye-Mac
Ukusesha umlando weSafari kuyinqubo ezogwema ukubheka ngokubonakalayo ukuthi imaphi amakhasi esiwavakashele ngqo emlandweni.
Abafana baseCupertino basebenza ochungechungeni olususelwa encwadini ka-Isaac Asimov's Foundation, kulokho obekungaba uchungechunge lwezinganekwane zesayensi.
I-Apple iphinde isebenze ngemali engenzalo yemikhiqizo yayo
Lokhu kungenye yalezi "zindlela ezinhle" i-Apple evame ukuzisebenzisa ukuthengisa amadivayisi amaningi nokuningi ngemuva kokuqalisa ...
I-Apple Hires yangaphambili ye-Amazon CTO njenge-VP yeSoftware
Ukusayinwa kwe-Apple kwakamuva kuqinisekisa ukuthi inkampani esekwe eCupertino ifuna ukuqala ukwenza izinto ngokulungile, okungenani njengakuqala, lapho bekuyindlela yokulinganisa ngokuphepha.
I-Apple isivele ifinyelele kwinani lokukhiqiza elingu-100% ngamandla avuselelekayo. Izinhlelo abanazo nabahlinzeki zihlala.
Lezi akuzona izikhathi ezinhle kuMark Zuckerberg, naku-Facebook yakhe. Lokhu akuyona into entsha ...
Ungawafaka kanjani noma uwasuse amagama kusichazamazwi esakhelwe ngaphakathi seMac
Ufuna ukuhlela ngesandla isichazamazwi esakhelwe ngaphakathi se-Mac? Nazi izindlela ezimbili zokukwenza: ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza noma ngefayela lomthombo
Qaphela! Igagasi elisha lokweba imininingwane ebucayi ngemeyili ye- "Apple"
Ngalesi sikhathi futhi i-imeyili ebhokisini lami lokungenayo ingikhumbuza futhi ukuthi ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi (ukuzenza ongeyena ...
USaudi Prince unentshisekelo ku-Apple Park ohlelweni lwemfundo luka-Apple
Umhlangano phakathi kukaPrince Mohammed bin Salman, waseSaudi Arabia kanye nobuholi be-Apple, ukucacisa ngezinhlelo zokufunda ezweni lase-Asia.
Imiphumela yezezimali ye-Q2 2018, i-watchOS 1 ne-tvOS 4.3.1 beta 11.4, i-macOS 1 beta 10.13.5, izingqinamba nge-HomePod update yokuqala, i-iTunes version 12.6.4.3 yebhizinisi, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Futhi ukuphela kwempelasonto sekubuye futhi futhi njengenjwayelo kubhulogi yethu, wena…
Lo ngumqondo wekhanda eliphezulu we-Apple ophefumulelwe yi-HomePod
Sethule umqondo wamahedfoni aphezulu, angahle abe nezici ezithile zamahedfoni wokuqagela avela ku-Apple
Susa amafayela abiwe ku-ICloud Drive
Kuyacaca ukuthi ifu liyingxenye ebalulekile yempilo yansuku zonke yabasebenzisi be-Apple futhi ...
Ungalushintsha kanjani ulimi lwe-Mac yakho
Isifundo sokwazi ukuthi ungashintsha kanjani ulimi lwe-Mac olusetshenziswe kuma-macOS. Uma uthenge ikhompyutha yakho ye-Apple phesheya noma usohambweni futhi ufuna ukushintsha ulimi lohlelo noma ikhibhodi, sizokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani igxathu negxathu.
Nweba izithombe okwesikhashana ngaleli qhinga
Lapho sithwebula iMac yethu noma sibona ukubuka kuqala kwesithombe ngokucindezela ibha yesikhala, ...
UJohn Giannandrea, Inhloko ye-AI Strategy yakwaGoogle ujoyina i-Apple
Ngokuqinisekile ngaphezu kweyodwa ngeke kuzwakale igama likaJohn Giannandrea, okokuqala, kepha uGiannandrea wayeyinhloko ye ...
I-Apple Pay iyaqhubeka nokwanda eFrance, Canada nase-United States.
Abafana baseCupertino bandise inani lamabhange, izikhungo zezikweletu kanye nabakhipha amakhadi abasebenzisana ne-Apple Pay.
I-Apple Watch ingaba nesikrini se-MicroLed ngokuhlangana ne-PlayNitride
I-Apple izocabanga ngokufaka izibonisi ze-MicroLed kumikhiqizo ezayo, kuqala nge-Apple Watch. Ukukhiqizwa kuzoba yi-Apple uqobo noma inkampani yaseTaiwan i-PlayNitride
Amalungelo obunikazi e-Apple uhlelo olusha lwe-Heads-up Display nge-Augmented Reality
I-Apple inelungelo lobunikazi lohlelo olusha lwe-Heads-up Display lwezimoto ezizimele. Le patent ikhombisa ukuthi imininingwane izokhonjiswa kanjani nokuthi hlobo luni lwezinto esizolubona kufasitela langaphambili lemoto